हेमराज र रोहितबिच किन भयो ब्रेकअप ? « Ramailo छ
हेमराज र रोहितबिच किन भयो ब्रेकअप ?
समय : 1:03 pm
फिल्म ‘द ब्रेकअप’ का निर्देशक हेमराज विसी र निर्माता रोहित अधिकारीबिच ब्रेकअप भएको छ । ‘द ब्रेकअप’ को निर्माण बाट रोहित अधिकरी फिल्म्स बाहिरीएको सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा निर्माता अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।
‘अब चलचित्रको सम्पूर्ण कामहरु साझेदार कम्पनी ह्यपी प्लानेट ले गर्नेछ । चलचित्रको सबै पोस्टर साथै अन्य प्रचार सामग्रीहरुबाट मिडियाका साथीहरुलाई पनि मेरो नाम तथा कम्पनीको नाम चलचित्र ‘द ब्रेकअप’ मा उल्लेख नगरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्द्छु । धन्यवाद’, निर्माता अधिकारीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् । फिल्मको इन्डक्ल्याप नहुँदै किन भयो त ? निर्देशक र निर्माता बिच ब्रेकअप ?
‘ठुलो इष्यु केही पनि होइन’, निर्माता अधिकारीको भनाई छ, ‘झगडा गर्नु भन्दा मिलेर छुट्टिएको राम्रो भनेर छुट्टिएको हुँ ।’ झगडाको मुल कारण खोल्न नचाहेपनि फिल्मको बजेट बढ्दा आफुले हात झिकेको निर्माता अधिकारीले घुमाउरो शैलीमा बताए । उसो त फिल्मको सबै जसो पक्षमा निर्माता अधिकारी सक्रिय थिए । हेमराज र रोहितले गाजलुमा सहकार्य गरेका थिए ।
निर्देशक विसीले भने निर्मातासँग भएको फुटबारे हाल केही नबताउने बताए । ‘फिल्मको इन्डक्ल्यापमा सबै कुरा गरौंला’, निर्देशक विसीले भने । फिल्ममा आशिरमान देशराज जोशी, शिल्पा मास्के र ईच्छा कार्कीको मुख्य भूमिका छ । अष्ट्रेलियाबाट छायाँकन सकेर फर्किए लगत्तै निर्देशक विसी र निर्माता अधिकारी छुट्टिएका हुन् ।